Ikhulu le-18. I-villa enhle e-w/pool + ithala. - I-Airbnb
Ikhulu le-18. I-villa enhle e-w/pool + ithala.
Panicale, Umbria, i-Italy
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Sabina
U-Sabina Ungumbungazi ovelele
I-villa enhle enezitezi ezintathu emaphandleni, ingxenye yesakhiwo esakhiwe ngezindlu ezi-3 ezihlukene (le villa + 2 amakotishi). Isakhiwo, esakhiwa ekuqaleni ngo-1703, sasiwumshini wokugaya amanzi. Enkabeni ye-Italy (Umbria, eduze neLake Trasimeno neTuscany).
I-Umbria - enkabeni ye-Italy, eduze komngcele neTuscany, eduze neLake Trasimeno, imizana emihle namadolobhana anomlando njengePerugia, Assisi, Città della Pieve, Pienza kanye neCortona. Enhle, ehlome ngokuphelele (ihlanganisa uxhumano lwe-inthanethi), i-villa efakwe kahle futhi enomoya ngokuphelele endaweni yamatshe esanda kuvuselelwa yekhulu le-18 emagqumeni, endaweni enkulu yezolimo (ukukhiqizwa kwamafutha omnqumo).
Le ndlu ezimele futhi enesici esizimele ibizwa nge- "Il Casale", futhi isezingeni eli-3: esitezi esiphezulu kunamagumbi okulala amabili, igumbi elinombhede ophindwe kathathu kanye namagumbi okugezela amabili (elilodwa elineshawa, elinye. nobhavu); Esitezi esiphakathi kukhona igumbi lokuphumula elibanzi negumbi lokudlela elineziko, ikhishi elihlome ngokuphelele (lihlanganisa umshini wokuwasha izitsha) kanye negumbi lokugezela. Esitezi esiphansi kunekamelo lokulala elengeziwe elinombhede osofa ababili. Indlu ingalala izivakashi ezingaba ngu-9.
Igumbi lokudlela libheke ethaleni elihle le-terracotta elihlomele ukudla ngaphandle futhi elicwiliswe endaweni eluhlaza.
Izitezi ze-terracotta zazenziwe endaweni ngezandla; amathayili ezindlu zokugezela nekhishi apendwe ngesandla, ifenisha yenziwe ngama-antques noma ifenisha yezwe elidala futhi eziningi zempahla zenziwe ikakhulukazi ngabadwebi bendawo.
I-Il Casale yakhiwa ngo-1703, inxanxathela yayiyisigayo samanzi futhi lokhu ekuqaleni kwakuyindlu yomshini wokugaya.
Kukhona ichibi elihlanganyelwe (kunamanye amakotishi amabili kule nkimbinkimbi) anethala leterracotta elibanzi elinezoso zamatshe ezinkulu kanye neshawa yangaphandle, ehlonyiselwe ukudla ngaphandle.
Endleleni yethu kunezindlela eziningana zokuhamba kwemvelo, ukugijima, ukuhamba ngezinyawo.
Idolobhana eliseduze (Tavernelle di Panicale) liyimizuzu eyi-10 ngemoto. Lapha uzothola ama-pizzeria, amabhikawozi, izitolo ezinkulu, izitolo, njll. Kunezindawo zokudlela ezimnandi endaweni ezinikezela ngezidlo ezijwayelekile zase-Umbrian. Amabhishi neziqhingi zeLake Trasimeno kukude ngemoto imizuzu engu-20. E-Tavernelle uzothola inkundla yethenisi kanye nepaki elikhulu lamanzi.
Lapho ubhukha sizokuthumela iziphakamiso zethu mayelana nezindawo ezithakazelisayo ongavakashela kuzo, imisebenzi kanye nezindawo zokudlela esizithandayo endaweni. Ngokuqinisekile singatusa ukuvakashela imizana emihle ebheke iLake Trasimeno, njengeCastiglione del Lago nenqaba yayo kanye nePanicale; amadolobha amadala, abukekayo njengeCittà della Pieve; kanye nezindawo ezidumile zobuciko namasiko njenge-Assisi nePerugia. Ukusuka endlini yasepulazini ungavakashela kalula amadolobha aseChiusi (umnyuziyamu wase-Etruscan kanye nama-stes), iMontepulciano (edume ngokukhiqiza kwayo iwayini), iCortona nePienza eTuscany. Kuneziqhingi ezimbili eLake Trasimeno, esinye sazo esiyindawo yokulondoloza imvelo, futhi kunendawo yokulondoloza izinyoni ogwini lwaleli chibi. Futhi, ungase uthande ukuyonambitha iwayini futhi uvakashele izindawo ezikhiqiza iwayini, noma uthenge ushizi wasendaweni okhiqizwe komakhelwane bethu. Kungenzeka futhi nokuyozingela ama-truffle (ngesikhathi sezinyanga zasehlobo) noma ukunambitha ukudla kwendawo embukisweni wasehlobo. Efulethini lakho uzothola uhlu lwemicimbi yasendaweni (imibukiso yasehlobo, imikhosi yomculo, yaseshashalazini, amakhonsathi, njll.)
Udadewethu uMonica nomngane wakhe u-Ernesto, ophethe le ndawo, bahlala kule ndawo, eqhele ngemoto imizuzu embalwa nje. Sihlangana nezivakashi zethu nsuku zonke, lapho sidlula ukuze sibone ukuthi wonke umuntu ujabule endlini yasepulazini, nalapho siza nsuku zonke ukuzohlanza nokunakekela ichibi. Sizokujabulela ukukunikeza noma yiluphi ulwazi ongase uludinge noma ukukusiza ukubhuka izindawo zokudlela, noma okunye
Udadewethu uMonica nomngane wakhe u-Ernesto, ophethe le ndawo, bahlala kule ndawo, eqhele ngemoto imizuzu embalwa nje. Sihlangana nezivakashi zethu nsuku zonke, lapho sidlula ukuze…
USabina Ungumbungazi ovelele